Ann Linde : Waan ka xumahay natiijada doorashada Jarmalka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ann Linde (biddix) wasiirka EU-da iyo doorashada Jarmalka. Foto: Anders Wiklund/TT och Gero Breloer/TT.
Ann Linde : Waan ka xumahay natiijada doorashada Jarmalka
Doorashada Jarmalka iyo sida xisbiyada Sweden qaarkood u arkaan.
La daabacay måndag 25 september 2017 kl 09.49
Xisbiga Socialdemoquraadi-ga Jarmalka SPD ayaa guuldaro xoog lihi ka raacdey doorashadii shaley ka dhacdey dalka Jarmalka.
Hogaamiyaha dawladda Jarmalka Angela Merkel ayaa inkastoo ay jagadeeda sii heyn doonto afarta sano ee socota, ayaa hadana xisbigeeda Kristdemokrati-gu, wuxuu doorashadaan ku waayey codad badan oo uu horey u heli jirey.
Reysal wasaaraha dalkaan Sweden Stefan Löfven ayaa hanbalyo ku saabsan guusha ay doorashada ka gaartey u direy hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel.
- Waxaan ugu hanbalyeynayaa Angela Merkel guusha ay doorashada ka soo hoysey, labadayada dalna waxaan u rajeynayaa in xiriirkoodu sii fiicnaado, waana in aan ka wada shaqeynaa sidii aan u xoojin laheyn dimoquraadiyadda Europé, ayuu yiri Stefan Löfven.
Wasiirka dalkaan Sweden u qaabilsan arrimaha midowga Yurub Ann Linde (S) ayaa sheegtey in ay ka xun tahay natiijada ka soo baxdey doorashada dalka jarmalka ka dhacdey:
- Dabcan waxaan ka xumahay xisbiga Socialdemoquraadi-ga oo jab weyni soo gaarey laakiin dhammaan xisbiyaddii dawladda jarmalka wadaaga ku ahaa ayaa hoos u dhacey, Waxaa noo muuqata in Merkel sii xukumi doonto Jarmalka in kastoo wadahadalo adagi ka horeeyaan dawlad in dalkaas laga dhiso , ayey tiri Ann Linde.
Hogaamiyaha xisbiga Sverigedemoqruraadi-ga Jimmie Åkesson ayaa aad ula dhacsan guulaha uu soo hooyey xisbiga Alternativ För Tyskland (AFD).
Hogaamiyaha xisbiga Vänster-ka Jonas Sjöstedt ayaa wax laga xumaado ku tilmaamey xisbiyada xagjirka ah ee doorashadaas codad dheeraad ah ku heley.
Hogaamiyaha xisbiga Libaral-ka Jan Björklund ayaa ku faraxsan in xisbiga dhiggiisa ah ee Libralka Jarmalku (FDP) uu guulo ka gaarey doorashadii shaley dhacdey, boosaskiisii baarlamaanka uu ku lahaana xafitey.
Dalka Jarmalka ayaa waxaa shaley ka dhacdey doorasho taas oo inkastoo xisbiyaddii dawladda dalkaas wadaaga ku ahaa ay guuleyteen ayaa waxaa hadana ku soo baxey xisbiyo xagjir ah oo shacbiyad doon ah.
Xisbiga CDU ee ay hogaamiso Angela Merkel ayaa heley boqolkiiba 32, 8 boqolkiiba, xisbiga Socialdemoquraadi-ga (SPD) ayaa isna heley 20,7 boqolkiiba.
Xisbiga Socialemoquraadiga SPD ayaa sheegey in aysan qeyb ka noqon doonin dawlad xisbiyada kale ay la wadaagaan oo dalkaas laga soo dhiso.